Huchi hwouchi hunovhara Machira Vagadziri & Vatengesi - China Huchi zinga rinotutisa Machira Fekitori
Simba Rinoshanda Stripe Cellular Shades Mucheka Wekumba
Iyo cellular shades jira rudzi nyowani rwegirini dziviriro yezvakatipoteredza hwindo kushongedza zvinhu zvekuvaka. Iyo yakasarudzika dhizaini inobvumira mweya kuti ichengetwe mune isina mhango layer, iyo inochengeta iyo yemukati tembiricha yemukati uye inochengetedza magetsi emagetsi emhepo conditioner. Yayo anti-ultraviolet uye thermal kuputira mabasa anonyatso chengetedza zvinhu zvemumba, anti-static kurapwa, zviri nyore kusuka. Tambo yakavanzwa muhomba yakaturikidzana uye ine chimiro chakakwana. Izvo zviri nyore uye zvinoshanda kushandisa kupfuura echinyakare maketeni.
Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Isina Cordless Kumusoro Pasi Pazasi Kumusoro Uchi Huru Bofu Mucheka Kusviba
Huchi hwehuchi hupofu hwakagadzirwa zvinoenderana neyakaumbwa huchi. Nekuti iyo "huchi" inoumba yakasarudzika chipinganidzo, mweya unogara mu "muzinga", uchiwedzera simba-rekuchengetedza simba risingafananidzwe nemamwe machira. Iyo yakasarudzika "mhango yezinga reuchi" dhizaini yezinga rehuchi inopofumadza inochengetedza mwero wekupisa kwemukati, inodzivirira uye inodziya, uye inogadzira kunzwa kwekudziya munguva yechando uye kutonhorera muzhizha. Akasiyana machira ekutumira emwenje, huchi hwehuchi, mavara, uye mashandiro nzira anounza akasiyana siyana esarudzo uye kaviri nyaradzo yemumba.
Isu tinopa emahara sampuli inowanikwawo kuti iwe utarise mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Kaviri Cell Cell Honeycomb inopofumadza Mucheka Semi-Kusviba
Huchi hwehuchi hunopofumadza jira rudzi rutsva rwegirinhi inochengetedza zvakatipoteredza hwindo rekushongedza zvekuvaka. Iyo yakasarudzika dhizaini inobvumira mweya kuti ichengetwe mune isina mhango layer, iyo inochengeta iyo yemukati tembiricha yemukati uye inochengetedza magetsi emagetsi emhepo conditioner. Inorerutsa inorema yechinyakare machira ejira, ipa vanhu pfungwa yekumhanya nekukurumidza, kugona kwakanyanya. Kubatsira kwacho ndechekuti kana huchi hwehuchi hwakavharwa, iyo nzvimbo yekuvharira hwindo idiki, kuti ugone kuwana mukana wakakura wepakati mumba.
Yakasimba Cordless Pleated Window Blinds Mucheka
Pleated windows blinds anga ari anozivikanwa muEurope. Mushure mekuunzwa kuChina mumakore achangopfuura, anowanzo shandiswa mudzimba, dzimba dzekuchengetedza uye dzimba. Iwo machira anotetepa akaumbwa zvechigarire nekudzvanya kupisa, anogara kwenguva refu uye haasi nyore kuumbika. Naizvozvo, hapana chikonzero chekushushikana kuti rakapetwa hwindo rinopofumadza jira rinozoremara mushure mechigarire uye ndokurasikirwa nechitarisiko chayo chepakutanga. Uye zvakare, iyo yakachena uye yekuchengetedza yemukati mawindo inopofumadza jira zvakare iri nyore kwazvo, inongoda chete kushandisa feather dusters kana kushandisa bvudzi dryer kana vacuum cleaner kuichenesa. Usambofa wakaibvisa uye uigeze mumvura.
Yakashongedzwa Uye Thermal Honeycomb Bofu Mucheka WeHofisi
Huchi yehuchi isingaoni jira inogadzirwa zvinoenderana neyakaumbwa huchi. Iyo yakakamurwa kuita kudzima magetsi uye semi-kudzima magetsi dzakateedzana. Iyo semi-kudzima zinga rehuchi inopofumadza machira inosanganisa mashandiro uye runako rwehuchi hunopofumadza machira pamwe nekugadzirwa kweiyo yakasarudzika pleated inopofumadza machira. Iyo iri padyo-yakakwana hwindo rekushongedza chigadzirwa. Huchi yehuchi inopofumadza inokunda kushaya simba kweketeni rakakwenenzverwa nekuda kwekuwedzera kwekukwirira uye huremu zvichikonzera kutwasuka kwemutumbi wejira, kuitira kuti muviri unopofumadza urambe wakatsiga uye vara racho harina musono.
Energy-yekuchengetedza Honeycomb inopofumadza Mucheka Semi-kudzima magetsi
Cellular Pleated blinds ave akakurumbira muEurope. Mushure mekuunzwa kuChina mumakore achangopfuura, anowanzo shandiswa mudzimba, dzimba dzekuchengetedza uye dzimba. Kubatsira kweGroupeve Cellular pleated inopofumadza jira iri seinotevera: Kubvarura kuramba, hapana kusimbisa kunodiwa, yakasarudzika misodzi yekudzivirira, yakakosha mhepo kuramba uye kuramba kushandisa kazhinji. Iyo zvakare ine nani mwenje kuramba pane iyo yakasikwa fiber machira, kunyanya iyo mwenje kuramba kuseri kwegirazi yakanaka kwazvo. Shading, light transmission uye kufefetedza.
Iyo cellular pleated inopofumadza machira kuchenesa zvakare zvakareruka, chinongoda chete kushandisa minhenga guruva kana kushandisa bvudzi dryer kana vharumu yekuchenesa kuichenesa. Usambofa wakaibvisa uye uigeze mumvura.
Fekitori Mutengo Horizontal Dual Shades Honeycomb Mucheka WeHofisi
Huchi hwehuchi hunopofumadza jira rudzi rutsva rwegirinhi inochengetedza zvakatipoteredza hwindo rekushongedza zvekuvaka. Chimiro cheGroupeve yeuchi hwechi inopofumadza machira ari nyore uye masitayera akapfuma, zvichibvumira vashandisi kusarudza vakasununguka zvinoenderana nezvinodiwa nenzvimbo nemhepo, zvichigadzira matauriro epfuma epamba. Kunaka kwekudzivirira inzwi kunoita kuti imba iwedzere kunyarara uye kugadzikana. Mucheka wehuchi unorapwa pakakwirira tembiricha uye hauna kumbobvira waremara, zvakare kurapwa neanti-fouling uye anti-static kurapwa, iri nyore kuchenesa.
Mufashoni uye Concise Double Cellular Honeycomb Bofu Mucheka
Huchi hwehuchi hunopofumadza jira rudzi rutsva rwegirinhi inochengetedza zvakatipoteredza hwindo rekushongedza zvekuvaka. Iyo yakasarudzika dhizaini inobvumira mweya kuti ichengetwe mune isina mhango layer, iyo inochengeta iyo yemukati tembiricha yemukati uye inochengetedza magetsi emagetsi emhepo conditioner. Iyo zvakare ine yakasarudzika yekushandisa system, yakavimbika mashandiro uye mushe mashandiro. Kubatsira kwacho ndechekuti kana huchi hwehuchi hwakavharwa, iyo nzvimbo yekuvharira hwindo idiki, kuti ugone kuwana mukana wakakura wepakati mumba.
Yemahara Sample Cordless Cellular Shade Mucheka 20mm
Cellular shades yakave yakakurumbira muEurope. Mushure mekuunzwa kuChina mumakore achangopfuura, anowanzo shandiswa mudzimba, dzimba dzekuchengetedza uye dzimba. Mazhinji ejira remashizha emumvuri akagadzirwa nemachira asina kurukwa, uye pamusoro pacho pakaperera, izvo zvine mhedzisiro yeanti-ultraviolet, guruva uye hunyoro. Iyo cellular shades jira inorapwa neakasarudzika maitiro ekudzivirira static magetsi, chando, uye mvura, uye hazvisi nyore kuunganidza guruva uye chakuvhe, uye zviri nyore kuchenesa nekuchengetedza.
Hukuru hwemaseru machena machira akanaka, uye kune akasiyana akasiyana akakurumbira mavara kuti asarudzwe. Yemahara sampuli inowanikwawo kwauri kuti utarise mhando uye sarudza ruvara rwakanangana pamberi peodha.
Kupisa Kunodzivirira Ruzha Rusinganzwisisike Nyuchi Inotadzisa Mucheka Semi-Kusviba
Huchi hwehuchi hunopofumadza jira rudzi rutsva rwegirinhi inochengetedza zvakatipoteredza hwindo rekushongedza zvekuvaka. Iyo yakasarudzika dhizaini inobvumira mweya kuti ichengetwe mune isina mhango layer, iyo inochengeta iyo yemukati tembiricha yemukati uye inochengetedza magetsi emagetsi emhepo conditioner.
Iyo jira ndeye antistatic, haina adsorb solid solid mumhepo, uye haina kuomerera kuguruva.
Saizi yacho inogara iripo, izvo zvemucheka zvinoona kuti hazvisaumbike uye hazvizovhiringidze, uye zvinoramba zvakatsiga kwenguva refu.
Huchi hwehuchi hunopofumadza machira kuchenesa zvakare zvakareruka, chinongoda kushandisa minhenga guruva kana kushandisa bvudzi kuomesa kana yekutsvaira kuti uchenese. Usambofa wakaibvisa uye uigeze mumvura. Zvinokurudzirwa kuti bvudzi rekuomesa bvudzi rishandurwe nemhepo inotonhora.
Dhizaini Yemazuva Ano Huchi hweHuchi Hwakapetwa Huru Mucheka Wekudyira
Mapofu akafuridzirwa akakodzera dzimba dzekurara, dzimba dzekugara, dzimba dzekufundira, dzimba dzekudyira, malofti uye dzimwe nzvimbo. Jira rakapofomadzwa rakapofumadzwa rakafemerwa dhizaini yechivako chakanyatsonaka pasirese - huchi hwekugadzira. Iyo yakasarudzika huchi huchi dhizaini inogona kuumba yakasarudzika chipingaidzo mukati mehomwe "huchi" Itai kuti mweya ugare mu "nyuchi gomba" (mweya static rukoko), zvinonyatso chengetedza muyero weyemukati tembiricha, kupisa kupisa uye kudziya, uye gadzira inotonhorera. chirimo uye inodziya nguva yechando.
Nyowani Dhizaina Wholesale Honeycomb Organ Curtain Jira 38mm
Keteni keteni kana mapofu ave akakurumbira muEurope. Mushure mekuunzwa kuChina mumakore achangopfuura, anowanzo shandiswa mudzimba, dzimba dzekuchengetedza uye dzimba. Iyo nhengo yeketeni machira ekuchenesa ari nyore chaizvo, asi ndokumbirawo uone kuti nzira yacho haigone kushandiswa zvisirizvo, isu tinongoda chete kushandisa minhenga guruva kana zvakapfava zvekuchenesa maturusi. Kana shandisa bvudzi rekuomesa kana yekuchenesa kuti uchenese. Usambofa wakaibvisa uye uigeze mumvura. Zvinokurudzirwa kuti bvudzi rekuomesa bvudzi rishandurwe nemhepo inotonhora. Shandisa jira nyoro kana chipanji chakanyoroveswa nemvura inodziya kupukuta machira. Kana zvichidikanwa, wedzera sipo nyoro, pukuta zvinyoro nyoro kudzivirira kuunyana.